DEG DEG:Wararkii ugu dambeeyay xaalada Jiidaha hore ee Dagaalka Puntland & Somaliland + Warar sheegaya in…….. – Puntland News.net
Home 2018 January 14 Puntland News, Somali News DEG DEG:Wararkii ugu dambeeyay xaalada Jiidaha hore ee Dagaalka Puntland & Somaliland + Warar sheegaya in……..
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya deegaanka ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in maanta ay xaaladu degan tahay balse saan saanta ciidan ee labada dhinacba ay tahay mid saraysa.
Goob joogayaal ku safray wadada dheer ee laamiga ah ayaa sheegaya in joogitaanka labada dhinacba ay kordhiyeen saacadihii ugu dambeeyey, waxaana cabsi laga qabaa dagaal buuxa oo ka dhaca deegaankaasi.
Ciidamada Puntland ayaa si aad ah loo geeyey jiidaha dagaalka oo aan noqoneyn sidda wararku sheegayaan hal goob oo kaliya balse ay dhici karaan deegaano cusub in ay ku fidaan.
Ha njabaadaha labada dhinac ayaa gaadhay heerkii ugu sareeyey, waxaana dhinaca Puntland la xaqiijiyey in ay ka go’an tahay xoreynta dhulka Puntland ee ay Somaliland haysato tan iyo sannadkii 2007-dii oo ay kamid tahay magaalada Laascaanood.
Somaliland ayaa iyana dhankeeda ku doodaysa in xuduudeedu ay marto deegaanka Yoocada oo ay tagi doonaan ciidamadeedu.
Lama garan karo waxa uu xaalku ku dambeyn doono balse xiisadaha dagaal ee labada dhinac ayaa sii xoogaysanaya markasta.
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net – Garoowe